Fandaharanasa Defis: omen-danja ny vary sy ny katsaka | NewsMada
Fandaharanasa Defis: omen-danja ny vary sy ny katsaka
Natao ny 9 aogositra teo teny amin’ny Tranoben’ny tantsaha Nanisana, ny fifanarahana, eo amin’ny Fandaharanasa fanohanana ny famokaran’ny tantsaha (Defis) sy ny vondron’ny tantsaha. Voakasik’izany ny faritra Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony ary Ihorombe, anisan’ny iasan’ny Defis, ka hatao laharam-pahamehana ny fambolem-bary sy ny katsaka.
Mitotaly 9.000 ha ny velarantany hohajariana any amin’ireo faritra telo ireo, ka tanimbary ny 7.000 ha ary 2.000 ha ny tanin-katsaka. Hanatanterahana izany, hisy ny fanofanana ara-teknika ny tantsaha ka hatsangana ny saha sekoly vary miisa 160 sy saha sekoly katsaka miisa 80. Hovatsina fitaovam-pamokarana koa izy ireo (angadin’omby, ragiragy, fiavana) sy masomboly (vary 30 t; katsaka 33 t) ary zezika (300 t). Vinavinaina ny hahazoana voka-bary maherin’ny 4,5 t/ha sy katsaka 2 t/ha.
Miisa 10 ny vondron’ny tantsaha hahazo tohana ary hizara ny traikefa azony any amin’ny taniny sy amin’ireo tantsaha hafa indray izy ireo, avy eo. Manodidina ny 5.000 ny tantsaha kendrena amin’izany ao anatin’ny faritra telo voalaza. Miisa 315 ny tantsaha kendrena ho lasa mpamokatra masomboly, ka tsy hividy intsony amin’ny taom-pambolena manaraka. Mitentina 800 tapitrisa Ar ny tetibola vatsin’ny Defis, ka ny vondron’ny tantsaha ihany no mitantana azy, misafidy ny toerana hananganana ny saha sekoly. Tanjona ny hahamatihanina sy maha tantsaha mpandraharaha azy ireo ka ho tena mahaleo tena.